» West Brom oo Guuldaro dhabarka u saarisay Kooxda Liverpool
West Brom oo Guuldaro dhabarka u saarisay Kooxda Liverpool
Feb 12, 2013 - jawaab	Aqrisatay:2601Kooxda Liverpool ayaa guuldarro lama filaan ah ay ka soo gaartay kooxda West Brom oo marti ugu aheyd Anfield, kuwaasoo 2-0 kaga badiyay xilli Steven Gerrard rigoore laga badbaadiyay.
Liverpool ayaa ciyaarta ku soo gashay si dardar ah, iyadoo qeybtii hore ee ciyaarta abuuray fursado dhowr ah oo kuwii ugu dhawaa ay ka mid ah kubad madax aheyd oo uu goolhaye Foster si qatar ah uga bixiyay Daniel Agger.
Foster ayaa sidoo kale fursad kale oo dahabi aheyd ka badbaadiyay Downing, waxaana kubada inteeda badan iska heysatay kooxda marti loo ahaa iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Goolhaye Foster ayaa sidoo kale fursado qaali ah ka badbaadiyay bilowgii qeybta labaad Steven Gerrard iyo Jordan Henderson.
Daqiiqadii 77aad ayaana Liverpool ay heshay rigoore markii Olsson uu qalad ku galay Suarez oo xerada ganaaxa ku dhex jira.
Kabtan Steven Gerrard ayaana u soo istaagay rigoorada, laakiin waxaa ka badbaadiyay goolhaye Foster oo ahaa xiddiga ciyaarta marka loo fiiriyo fursadihii uu ka beeniyay kooxda Reds.
Ciyaarta oo 15 daqiiqo dhiman ayaana waxaa bedel ku soo galay da’ yarka reer Brazil Phillipe Coutinho kaasoo kulankiisii ugu horeysay caawa u saftay kooxda Liverpool tan iyo intii uu bishii hore kaga soo biiray Inter Milan.
Daqiiqadii 81aad ayaana West Brom ayaa gool kaga naxsatay Liverpool iyadoo madaxa uu ugu dhaliyay McAuley. Waxaana uu ahaa gool lama filaan ah madaama West Brom ay ku adkeyd inay tagaan inta badan ciyaarta diilinta ganaaxa Liverpool.
Waxaana ciyaarta hurdo u diray Romelu Lukaku oo bedel ku soo galay ciyaarta oo goolka labaad u saxiixay kooxda martida aheyd daqiiqadii 90aad ee ciyaarta.
Labadaas gool ayaana West Brom ka saaciday inay guul ku gaarto Anfield, waxaana ay taasi ka saacideysa inay ka sarre maraan kooxda Liverpool oo u soo dhacday kaalinta 9aad iyagoo leh 36 dhibcood.
West Brom ayaana leh 37 dhibcood oo ku jirta kaalinta 8aad halka ay ku dhibco yihiin Swansea oo ku jirta kaalinta 7aad ee kala sareynta horyaalka.
Kooxda West Brom ayaana xilli ciyaareedkan lix dhibcood ka qaadatay Reds ka dib markii kulankii gurigooda ay kaga soo badiyeen Liverpool 3-0.